M/waynihii hore ee puntland Cade Muuse oo kahadlay marxalada siyaasadeed ee xiligaan kajirta Puntland – SBC
M/waynihii hore ee puntland Cade Muuse oo kahadlay marxalada siyaasadeed ee xiligaan kajirta Puntland
Madaxweynihii hore dowladda Puntland Gen.Cadde Muuse Xirsi ayaa maanta shir jara’id ku qabtay magalada Qardho.
Madaxwaynihii hore ee puntland Gen: Cade Muuse ayaa soo jeediyay in mudada dowlada hada jirta ay talada sii hayso in ta kadhiman dhamaadka sanadka 2013ka,8da janaayana ay dhacdo doorashada madaxwaynaha puntland .
”Dowladii baan arkay oo aan ku noq noqday,raga iyana ka agdhow dowlada ayaan utagay waxana dhamaantood aan usheegay in ku dadaalan kashaqaynta nabad galyada,arintaani waxa ay ubaahnayd oo kaliya in lawada hadlo oo meel wax lawada dhigo,shicbigana waxaan usoo jeedinaya in ay nabad galyada kashaqeeyan”Sidaasi waxaa yiri Gen Cade Muuse .
Gen. Cadde Muuse ayaa mar uu ka hadlaayey arrimaha Xisbiyada sheegey in aysan jirin Xisbiyo nidaam sharci ah ku yimid ”qaar ayaaba ka kooban saddex qof iyo waxaan dhaamin, sidaas darteed waa muhim in la helo nidaam Dimoqraadiyad ah, waxaa hadda maqan nidaamkii sharciga ahaa ee Dimoqraadiyaddu ku istaagi lahayd, laakiin dadku u wada dhan yahay oo laga wada tashadey”Sidaasi waxa yiri markale madaxwaynihii hore ee puntland Gen:Cade Muuse .
Dhagayso Warbixinta Cade ee Maxamed Deeq uu Ka diyaariyay .